ओमकार टाइम्स आज असार १५, तत्कालीन कृषि मन्त्री हरि पराजुलीले कस्तो हर्कत मच्चाएका थिए त? - OMKARTIMES
आज असार १५, तत्कालीन कृषि मन्त्री हरि पराजुलीले कस्तो हर्कत मच्चाएका थिए त?
काठमाडौं । देशभर रोपाइँको चटारो चलिरहेकाे बेला २०७२ साल असार १५ गते मंगलवार तत्कालिन कृषिमन्त्री हरि पराजुलीले अश्लिल हर्कत मच्चाएकाे दिन ।
असार १५ को अवसर पारेर मन्त्रीदेखि कलाकारसम्म खेतमा धान दिवसको रमाइलोमा जुटेका थिए । काठमाडौंको मुलपानीमा पुगेका कृषिमन्त्री हरि पराजुलीले भने खेतमै रमिता देखाएका थिए । जसका कारण उनकाे मन्त्री पद नै धरापमा परेकाे थियाे ।